Ọrụ data na ụzọ dị n'ịntanetị ịzụta | Martech Zone
E nwere ọtụtụ isi n'okporo ụzọ ịzụta ebe ndị na-ere ahịa nwere ike ịnakọta ma jiri data iji mee ka ahụmịhe ịzụ ahịa ahụ ka mma wee gbanwee ndị nchọgharị ka ha bụrụ ndị na-azụ ihe. Mana enwere ọtụtụ data na ọ nwere ike ịdị mfe ilekwasị anya n'ihe ndị na-ezighi ezi ma hapụ usoro. Ọmụmaatụ, 21% nke ndị na-azụ ahịa hapụrụ ụgbọ ha nanị n'ihi na ndenye ọpụpụ usoro bụ adighi ike.
Tozọ ịzụta nwere ọtụtụ isi ebe ndị na-ere ahịa nwere ike ịnakọta data bara uru, melite ahụmịhe ịzụ ahịa, ma gbanwee ihe nchọgharị n'ime ndị na-azụ ahịa. Ma lezienụ anya: ụda olu data nwere ike ịba ụba, ọ dịkwa mfe ịhapụ ụzọ. Site na iduzi "data detours", ndị na-ere ahịa nwere ike ilekwasị anya na data nwere ike ịchụpụ ndị ahịa n'ofe njedebe.
Ntụaka wepụtara infographic Ọrụ Data na Onlinezọ Ntanetị Purzụta na-enye nghọta banyere data kachasị mkpa ma rụọ ọrụ na ụzọ ndị nwere ike iduga ndị na-ere ahịa ụzọ.
Tags: ịgbahapụLeleedatachọpụtaranzubeụzọ ịzụtaịzụta omumezụta dataimeghari zuoresearch